यातायात व्यवसायीलाई लाग्यो यस्तो कडा धक्का , अब के होला ?? – PathivaraOnline
Home > समाचार > यातायात व्यवसायीलाई लाग्यो यस्तो कडा धक्का , अब के होला ??
यातायात व्यवसायीलाई लाग्यो यस्तो कडा धक्का , अब के होला ??
काठमाडौं । सिण्डिकेट लाद्न नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रेका ब्यबसायीहरुलाई चालक र सहचालकले साथ नदिने भएका छन् । ‘विगतमा यातायात व्यवसायीहरुले गर्ने हरेक आन्दोलनमा हामी मजदुरहरु सहभागी हुँदै आएपनि यसपटक भने उनीहरुको आन्दोलनमा साथ नदिने यातायात मजदुरहरुले जनाएका छन् । ’नेपाल स्वतन्त्र यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले विगतमा
यातायात व्यवसायीहरुले गर्ने हरेक आन्दोलनमा हामी मजदुरहरु सहभागी हुँदै आएका थियौं, तर, यसपालि ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा आँफुहरु रहने बताए ।सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरु खारेज गरेर कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने नियमावली ल्याएको विरोधमा व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिरहँदा ब्यबसायीकै मातहतमा रहेर काम गर्ने चालक र सहचालकले साथ नदिँदा ब्यबसायीहरुलाई भने कडा धक्का लाग्ने देखिन्छ ।
उता सरकारले भने ब्यबसायिलो गाडी नचलाएको खण्डमा उनीहरुका गाडी नै खोसेर सुरक्षाकर्मी लगाएर चलाउने कडा चेतावनी दिएको छ ।
३० हजार घुससहित लालबाबु पण्डित र सिंह पक्राउ
दिल्लीले हारको कारण पत्ता लगायो, अबको खेलमा सन्दीप नभै नहुने यस्तो निष्कर्ष
वैशाख मै बाढी आएपछि